Ho an'ny mpizaha tany izay te-hialokaloka any amin'ireo toeram-ponenana, ny firenena mahavariana an'i Chili , izay tsy dia mahafa-po loatra ny volany, dia tsy ho tsara kokoa. Eto ianao dia afaka manana fotoana tsara toy ny tia skiing, ary fialan-tsasatry ny torapasika . Izany dia noho ny toerana ara-jeografika misy ny firenena sy ny toetran'ny toetrany. Noho ny fisian'ny faritra avy any avaratra mankany atsimo ho an'ny 4000 km mahery, dia hita any amin'ny sehatra ety ivelany izy io. Noho izany, manomboka ny maraina isaky ny toeram-pialan-tsambo ianao dia afaka mandany ny hariva eny amoron-dranomasina. Manomboka amin'ny renivohitra Santiago sy manaraka ireo tanàna hafa any Chili, dia manantena ireo mpandeha ny toeran-kafa.
Ski Resorts any Chile
Ao Shily, misy toeram-pialan-tsasatra betsaka, fa anisan'ireo malaza indrindra amin'izy ireo dia azonao atao lisitra ireto manaraka ireto:
Ny toerana voalohany ao amin'ny lisitra, mazava ho azy, dia tokony horaisina any amin'ny nosy Portillo , izay heverina ho tsara indrindra eto amin'ny firenena. Izany dia amin'ny lafiny maro noho ny toerana ara-jeografika nahomby: eo amin'ny lafiny rehetra dia voahodidin'ny tendrombohitra avo izy, izay mihidy anaty peratra matevina. Ity toe-javatra ity dia mitondra anjara biriky amin'ny fiarovana azo antoka amin'ny rivotra miposaka ny lanezy sy avy amin'ny taratra manjelanjelatra, eo ambanin'ny fiantraikan'ilay lanezy mipetaka haingana. Portillo no lohatenin'ny toeram-ponenana tranainy indrindra ao amin'ny firenena, mitazona ny tantaran'ny fisiany nanomboka tamin'ny fotoana nanorenana ny lalamby izay natao tamin'ny 1910. Tamin'ny taona 1930, niseho ny fiakaran'ny bisikileta voalohany, ary nanjary nalaza tamin'ny fiaramanidina avy any Etazonia sy Eoropa ilay toeram-ponenana. Ny toeram-pitsangatsanganana dia 164 kilaometatra miala ny renivohitry ny firenena Santiago, raha miala ao ianao, ny lalana mankany io dia tokony haka adiny roa eo ho eo. Miaraka amin'ny fitaterana, tsy misy olana, fitaterana bus avy amin'i Santiago ka hatrany Portillo.
Ny toeram-pialan-tsambo malaza indrindra ao amin'ny firenena dia ny Sierra Mirador , izay eo akaikin'ny tanànan'i Punta Arena . Izy no mendrika ny lohatenin'ny toeram-pialan-tsambo tsy mahazatra indrindra manerana izao tontolo izao, satria miorina eo amoron-dranomasina izany. Noho izany, raha te hiala sasatra eny amoron-dranomasina ianao dia afaka mandeha any amin'ny toeram-pitsangatsanganana amin'ny antsasak'adiny amin'ny fiara.
Ny toeram-pizahantany ao Lagunillas dia 16 kilometatra miala ny tanànan'i San Jose de Maypo, any amin'ny faritra Santiago. Ny mpizaha tany dia manomboka mandeha amin'ny fiara iray amin'ny volana Jona ary mijanona hatramin'ny volana aogositra. Ny fototra dia eo amin'ny 2200 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Ny toeram-pitsangatsanganana dia mandany rivo-piainana mangatsiatsiaka ary milamina. Any amin'ny firenena iray manontolo dia io no hany fitsaboana tsy maka tombony. Na dia izany aza, ny fepetra rehetra momba ny fialam-boly mavitrika dia noforonina eto. Ny atleta sy ny mpizaha tany dia manolotra safidy 13 lalana, fiaramanidina telo. Mankanesa amin'ny alina, amin'ny alàlan'ny fiomanana manokana. Azonao atao ny mipetraka sy mihinana eo amin'ny faritry ny toerana. Misy trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny amin'izany.
Valle Nevado no toeram-pisakafoanana maoderina indrindra eto amin'ny firenena. Ny isan'ireo làlambe eo amboniny dia maherin'ny 30, ary ny 35% amin'izy ireo dia mibodo ny làlana "mainty" ho an'ny matihanina. Ny toerana misy an'i Valle Nevado dia ny tendron'ny Tendrombohitra El Plomo. Ny helikoptera ihany no azon'ny sasany amin'ny lalana.
Iray amin'ireo mendri-piderana indrindra ny toeram-ponenana Farellones - El Colorado - La Parva . Miara-miasa izy ireo amin'ny faritry ny ski-ski any Amerika Atsimo. Ny elanelan'i El Colorado dia 3025 m, misy làlan-tsoavaly 34, izay loha-laharana 2.2 km. Ho an'ireo mpankafy ny snowboarding dia misy zaridaina manokana.
Thermas de Chillán . Eo amin'ny tendron'ny volkano Chilliana any amin'ny 1600 m ambonin'ny tany no misy azy io. Ny isa dia 28, ary io toeram-ponenana io dia miavaka amin'ny làlana lava indrindra any Amerika Atsimo.
Chile - toeram-ponenana eo amoron-tsiraka
Toerana fitetezam-paritra any Chili - tsy ny hany marika eto amin'ny firenena. Ireo tia ny masoandro, ny ranomasina ary ny fasika, dia mipaka ny toerana tsara indrindra eny amoron-dranomasina, izay hita manerana ny morontsiraka. Ny sasany amin'izy ireo dia malaza amin'ny mponina akaikin'ny tanàna manda, ohatra, ny toerana misy ny torapasika Isla Negra dia eo akaikin'ny tanàna kely malaza izay nipetrahan'ny poeta malaza Pablo Neruda.
Raha miparitaka eny amin'ny ranomasina ianao dia sarotra noho ny rano mangatsiaka, dia afaka mankafy ny fomba fijery. Ny mpankafy ny fanjonoana dia hankasitraka ny habetsahan'ny trondro sy ny sokatra.
Toeram-ponenana Shily amin'ny ranomasina - paradisa ho an'ireo mpihira, mpizahatany izay te ho mavitrika. Ao amin'ny lisitr'ireo toeram-ponenana malaza indrindra dia ireto manaraka ireto:
Ny tanànan'i Antofagasta misy tora-pasika maro - afaka miditra aty amin'ny fotoana rehetra ianao, ny toerana dia malaza amin'ny asa fanompoana tsara sy ny foto-drafitr'asa.
Ny tanànan'i Arica dia manana tora-pasika tsara izay mirefy 20 kilaometatra, milamina milamina. Misy zaridaina nasionaly izay ahitanao ny volkano, farihy eny an-tendrombohitra.
Ny tora-pasik'i La Virgen, izay eo akaikin'ny tanànan'i Coquimbo . Ity tora-pasika ity dia tsara ho an'ny fianakaviana misy ankizy, satria tsy misy onja mahery, ary eo amoron-tsiraka dia misy fotsy madio fotsy.
Ny tora-pasika ao an-tanànan'i Valparaiso , izay karazany maro eto. Azonao atao ny manisy lisitra ireto manaraka ireto: Kintai , Zallar , Algarrobo , tanàna amoron-dranomasina. Ao anatin'ireo karazan-java-borona isan-karazany, dia azo antoka fa hisy ny hanome fahafaham-po ny fanandramana faran'izay mafy. Miankina amin'ny safidinao manokana, afaka manokana fotoana hanaovana fialan-tsasatra amin'ny morontsiraka ianao, ary mavitrika, manidina.
Beach Pichilemu, izay misy 20 minitra miala ny tanàna mitovy amin'io. Tena malaza amin'ny mpikarakara surfa ireny, ary koa ireo izay maniry fialantsasatra "fonenana".
Ny moron-dranomasin'i Renyaka dia toerana iray hafa ho an'ireo mpihira, ary ankoatra izany, manodidina ny sasany amin'ireo hotely tsara indrindra any Amerika Latina.
Ny moron-tanin'i Los Piqueroos, any amin'ny faritry ny zaridaina nasionaly, 40 km avaratry ny tanànan'i Chanaral. Noho ny vatany vato, sy ny fisian'ny onjam-be, ny tora-pasika dia tsara indrindra ho an'ireo tia ny fialana sasatra.
Noho izany, raha vao tonga any Chili, izay mpizahatany dia hahita ny toerana mety indrindra ho azy ireo araka ny safidiny.
Afenin'ny jiro potassium
Azo atao ve ny manao volo bevohoka?
Phosphogliv na Essentiale - inona no tsara kokoa?
Fanasana fiasa ho an'ny siny
Chandelier ho an'ny tafo rindrina: ahoana no hisafidianana?
Ahoana ny fisafidianana toetoetr'areto?
Nahoana no nofy volom-borona?
Ny mpilalao sarimihetsika Elizabeth Olsen dia nanome tafa sy dinika ho an'ny mpanangom-baovaon'ny Canadian Elle
Ducane Diet - Fahazoan-dàlana nomena
Filma vaovao ho an'ny ankizy
Fiantohana Frog - fomba fampiasana?
Famerenana ny totozy ao amin'ny akvarium
Nails: lamaody momba ny vanim-potoana 2016 - fotsy hoditra
Kitapo avy amin'ny kobay
Karazana kazhual - fitsipika momba ny famoronana sary
Loko misy menaka - famoronana
Nahoana ny nofy no manonofy?